Iswiidhen oo ciidamo sirdoon ah u direysa dalka Maali - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Maali oo galbeedka Afrika ku yaal.
La daabacay tisdag 18 februari 2014 kl 09.47
Waxay u badan tahay in ay Iswiidhen dalka Maali u diri doonto koox sirdoon ah oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka. Inta qof oo ay kooxdaasi ka koobnaan doonto weli lama oga, balse waxaa la isla dhexmarayey warar sheegaya ilaa 200 oo askari.
Laga soo bilaabo dayrtii la soo dhaafay waxaa caddaatey in qayb ka mid ah ciidamada xoogga dalka Iswiidhen laga soo celin doono Afqaanistaan. Kolkaas baarlamaanka iyo wasaaradda arrimaha dibeddaba looga xaajoodey haddii ay jiri hawlgalo kale oo caalami ah oo ay Iswiidhen gacan ka geysan karto.
Maanta ayuu guddiga baarlamaanku isu iman doonaa kulan qasriga weyn ee magaalada dhexdeeda ku yaal, halkaas oo la filayo in lagu dhawaaqo in ciidamo sirdoon ah loo diro dalka Maali oo ah dal dagaal sokeeye ku habsaday sannadihii dambe. Sidaasna waxaa soo xigatey idaacadda Ekot. Waxay ahayd sannadkii 2012 kolkii jabhado islaamiin ahi la wareegeen gacan ku haynta dalkaas, taasina ay markii keentay in dalka Faransiisku ciidamo u diro si loo xasiliyo dalkaas. Qaramada Midoobey ayaa hadda ku talajirta in halkaas la geeyo si loo sugo ammaanka.
Waxaa muuqata in dowladdu taageero ku heleyso ra’yiga in laga qaybqaato hawlaha Qaramada Midoobey ka waddo Maali, maadaama xisbiga Socialdemokraterna horay u dalbay in hawlagalada xiga oo ay Iswiidhen ka qaybqaadaneyso ay noqdaan kuwo Qaramada Midoobey ay ka waddo Afrika.
Warar ay idaacadda Ekot soo xigatey ayaa sheegaya in ay socdaan wadaxaajood ku saabsan in muddo afar bilood ah Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe loo diro konton askari oo socda guutooyinka ciidamada militeriga oo gaarka u tababaran, oo ay suurtagal noqon karto in ay weheliyaan ciidamo ka socda dalalka Baaltiga ama Finland. Welise ma jiro wax go’aan ah oo arrintaan laga gaarey.
Qeexid gaaban oo ku saabsan Maali:
Mali waa dal uu ka jiro dowlad madani oo ay sanooyinkii dambe saameyn weyn ku yeesheen kooxaha xagjirka ah ee islaamiinta. Kadib afgembi ay ciidamada militerigu ku qabsadeen talada dalka sannadkii 2012, ayey jabhado goonni-isu-taag doonaya oo ka tirsan qowmiyadda Tuwaaregga iyo kooxo xagjir ahi qabsadeen waqooyiga dalka. Kooxahaasna waxay kala ahaayeen Ansar Dine oo dooneysey dalka lagu dabbaalo xukunka shareecada iyo Aqim oo doonayey in goboladoodu goonni isu taagaan oo madaxbannaani helaan. Kooxaha xagjirka ahi waxay durbadiiba bilaabeen in ay dhulkii ay qabsadeen ku soo rogaan sharciga xagjir ah. Balse intaas kuma harine waxay bilaabeen in ay weerar ku qaadaan dalka qaybihiisa koonfureed oo dowladdu ka talineysey. Goboladaas xukunka qallafsani ka jireyna waxaa ka dhacay afduub badan oo loo aaneynayo in ay ka dambeeyeen kooxaha xagjirka ah islaamiinta ah.
Sannadkii 2013 ayuu dalka Faransiisku soo galay dalkaas oo ka saaray kooxihii xagjirka ahaa magaalooyinkii waaweynaa oo ay ka haysteen gobolada waqooyi, laakiin qaybo badan oo dalka ka tirsan ayeysan gacanta ku hayn ciidamada Faransiiska ama kuwa dowladda Maali.
Waxaa halkaas ku sugan ciidamada nabad-ilaalin oo ka socda Qaramada Midoobey, laakiin ilaa hadda waxaa qayb ka ah kala bar oo bar intii loogu talagalay.
Isha: DN, TT